प्लस सिलाई मेसिन, सबै भन्दा राम्रो र अपरिहार्य प्रस्तावहरु संग
प्लस सिलाई मेसिनहरू
सिलाईको संसारले धेरै मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ। लुगाहरूमा केही परिवर्तन गर्न सक्षम हुनु वा, तपाईंको आफ्नै डिजाइनहरू विस्तार गर्न पाउनु भनेको सधैं विश्वस्त हुने कुरा हो। त्यसोभए, त्यहाँ धेरै छन् जो हरेक दिन आफ्नो किन्न निर्णय गर्छन् पहिलो सिलाई मेसिन। अरूले अलि अगाडि जानुपर्छ र यसका लागि उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार मिल्ने मेसिन पनि चाहिन्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको उत्तम छनौट के हुन सक्छ पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ, तब हामीले आज तपाइँलाई बताउनुभएको सबै कुरा नभुल्नुहोस्। शुरुवातकर्ताहरूको लागि सस्तो र सजिलो सिलाई मेसिनहरूबाट, ओभरलक वा सबैभन्दा व्यावसायिक र औद्योगिक। तिनीहरूमध्ये तपाईं कुन रोज्न जाँदै हुनुहुन्छ?
सिलाई मेसिन सुरु गर्न
यदि तपाइँ एक खोज्दै हुनुहुन्छ सिलाई मेसिन सुरु गर्न, तल तपाईले चार मोडेलहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन शुरुआती वा साधारण कामहरूको लागि आदर्श हो:
मोडेल विशेषताहरू मूल्य
गायक प्रतिज्ञा 1412
- स्टिचका प्रकारहरू: 12
- स्टिच लम्बाइ र चौडाइ: समायोज्य
-अन्य सुविधाहरू: कम्प्याक्ट डिजाइन, सुदृढीकरण seams, zig-zag 133,24 €
प्रस्ताव हेर्नुहोस्नोट: 9. / /
गायक 2263 परम्परा
- स्टिचका प्रकारहरू: 16
- स्टिच लम्बाइ र चौडाइ: क्रमशः4र5मिमी सम्म समायोज्य
-स्वचालित बटनहोल4चरणहरू
-अन्य सुविधाहरू: सीधा र zig-zag सिलाई, सामान, प्रेसर खुट्टा 137,75 €
अल्फा शैली 40
- स्टिचका प्रकारहरू: 31
- स्टिच लम्बाइ र चौडाइ:5मिमी सम्म समायोज्य
-अन्य सुविधाहरू: एलईडी, समायोज्य खुट्टा, धातु स्पूल होल्डर 189,99 €
प्रस्ताव हेर्नुहोस्नोट: 10. / /
- स्टिचका प्रकारहरू: 40
-5 स्वचालित बटनहोल, 1 चरण
-अन्य सुविधाहरू: प्याचवर्क र क्विल्टिङका ​​लागि कार्यहरू 171,31 €
यद्यपि यो माथिको तालिकामा छैन, तपाईले पनि छोड्न सक्नुहुन्न Lidl सिलाई मिसिन, सुरु गर्नको लागि एक उत्कृष्ट मोडेल तर जसको उपलब्धता सुपरमार्केट स्टकमा सीमित छ।
तालिकामा कुनै पनि मोडेलको साथ तपाईं सही हुनुहुनेछ, तर यदि तपाइँ ती प्रत्येकको बारेमा अलि बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने, तल हामी तपाइँलाई यी प्रत्येक सिलाई मेसिनको मुख्य विशेषताहरू बताउनेछौं जुन ती व्यक्तिहरूको लागि उत्तम विकल्प भएको छ। सिलाईको संसारमा वा राम्रो गुणस्तर-मूल्य विकल्प खोज्नेहरूको लागि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ:
गायक वादा मेसिन...
यदि तपाइँ आधारभूत सिलाई मेसिन खोज्दै हुनुहुन्छ जसमा तपाइँलाई सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू छन्, गायक सिलाई मेसिन वाचा 1412 तपाईंको हुनेछ। गर्ने योजना छ भने हेमिङ वा जिपिङ जस्ता सजिलो कार्यहरू, साथै बटनहरू, तपाईंको लागि उपयुक्त हुनेछ। थप रूपमा, यो राम्रो मूल्यमा गुणस्तरीय मेसिन हो। यो प्रयोग गर्न सरल छ र हामी भन्छौं, यदि तपाइँ भर्खरै सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने आदर्श। यद्यपि यसमा 12 फरक टाँकाहरू छन्, तपाईंले सजावटी फेस्टुनहरू थप्नु पर्छ।
यसको मूल्य सामान्यतया वरिपरि छ 115 यूरो र सक्छ यहाँ तिम्रो हुनुहोस्.
गायक 2250 परम्परा
गायक २२५९ परम्परा -...
यो एक हो सबै भन्दा राम्रो बिक्री सिलाई मेसिन, त्यसैले, हामीसँग पहिले नै राम्रो डेटा छ। सिलाईको संसारमा सुरु गर्दा यसको धेरै प्रकार्यहरू साथै आवश्यक छ। साथै, त्यति मात्र होइन, कुल 10 वटा टाँकाहरू भएकोले, तपाईंसँग पहिले नै आधारभूत कुराहरू भएपछि यो पनि उत्तम हुनेछ। त्यसैले, तपाईं छोटो हुनेछैन। यो सबैभन्दा हल्का मध्ये एक हो, त्यसैले तपाईं यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार ढुवानी गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सिलाई मेसिन सुरु गर्न को लागी मूल्य लगभग छ 138 यूरो y तपाईं यसलाई यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ
अल्फा सिलाई मेसिन, ...
अर्को अत्यावश्यक मेसिन अल्फा स्टाइल ४० हो। कुनै पनि कुरा भन्दा बढि, किनभने यो धेरै सरल छ, सिलाईको बारेमा सोच्न नसक्नेहरूका लागि। अरु के छ त, यसको प्रकार्यहरू4चरणहरूमा स्वचालित थ्रेडर, बटनहोलको रूपमा पूर्ण छन्। यसमा एलईडी लाइटको साथै धागो काट्न ब्लेड पनि छ। याद गर्नुहोस् कि त्यहाँ 12 स्टिचहरू र दुई सजावटी स्केलपहरू छन्। सबैभन्दा सामान्य कामहरूको लागि आधारभूत के हुनेछ।
यस अवस्थामा, मूल्य लगभग 180 यूरो बढ्छ। यहाँ किन्नुहोस्।
भाइ CS10 मेसिन...
यदि तपाइँ पहिले आफैलाई प्रोत्साहित गर्न चाहनुहुन्छ भने इलेक्ट्रोनिक सिलाई मेसिन, यो तपाइँको सबै भन्दा राम्रो मोडेल हुनेछ। होइन किनभने यो इलेक्ट्रोनिक छ यो प्रयोग गर्न जटिल छ, एकदम विपरीत। सबैभन्दा आधारभूत स्टिचहरूको अतिरिक्त, तपाईं संसारमा आफ्नो पहिलो चरणहरू पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ patchwork साथै रजाई। यो प्रयोग गर्न जत्तिकै सरल छ कि हामीले कार्य गर्न जाँदैछौं, प्रत्येक स्टिचको लम्बाइ र चौडाइ छनोट गर्नुहोस् र यो हो।
राम्रो कुरा यो हो कि जब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कसरी सरलसँग काम गर्ने, यसले तपाइँलाई अलि अगाडि जान पनि अनुमति दिन्छ, यो कत्तिको पूर्ण छ भनेर धन्यवाद। यो सबै लगभग को मूल्य को लागी 165 यूरो। यदि तपाइँ यसलाई मनपर्छ भने, तपाइँ सक्नुहुन्छ यहाँ किन्नुहोस्.
यदि तपाइँ थप मोडेलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भाइ सिलाई मेसिन, लिंक भर्नुहोस् जुन हामीले भर्खर तपाईलाई छोड्यौं।
सस्तो सिलाई मेसिन
यदि तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ भने सबै भन्दा सस्तो विकल्प हो, तब तपाइँसँग छ सस्तो सिलाई मेसिन यद्यपि हामीले पैसाको लागि ठूलो मूल्यका साथ केही मोडेलहरू पनि चयन गरेका छौं:
- स्टिचका प्रकारहरू: 13
- स्टिच लम्बाइ र चौडाइ: समायोज्य छैन
-अन्य सुविधाहरू: डबल सुई 115,36 €
- स्टिचका प्रकारहरू: 17
- स्टिच लम्बाइ र चौडाइ:2मापन
-अन्य सुविधाहरू: स्वचालित घुमाउरो, प्रकाश, मुक्त हात कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।
गायक सरल 3221
- स्टिचका प्रकारहरू: 21
-स्वचालित बटनहोल १ पटक
-अन्य सुविधाहरू: प्रकाश, मुक्त हात, स्वचालित थ्रेडर 179,99 €
प्रस्ताव हेर्नुहोस्नोट: 9/10
अल्फा नेक्स्ट ४०
- स्टिचका प्रकारहरू: 25
-स्वचालित बटनहोल १ चरण
-अन्य सुविधाहरू: प्रतिरोधी, थ्रेडिङ को सजिलो 232,99 €
Jata MC695 मेसिन...
हामी सस्तो सिलाई मेसिनहरू मध्ये एक सामना गर्दैछौं। Jata MC695 मा जम्मा 13 प्रकारका स्टिचहरू छन्। धेरै छ मेशिन प्रयोग गर्न धेरै सरल र हल्का जब यो ढुवानी हुन आउँछ। यसमा धेरै सामानहरू, साथै एकीकृत प्रकाश छ। सुरु गर्नेहरूका लागि उपयुक्त तर तिनीहरूका लागि पनि जो पहिले नै थप केही चाहन्छन्। सायद नकारात्मक बिन्दु यो हो कि स्टिच को लम्बाइ र चौडाई समायोज्य छैन।
यसको मूल्य अपरिहार्य छ र यो तपाईंको लागि हुन सक्छ 113 यूरो। के तपाई उसलाई चाहनुहुन्छ? यहाँ किन्नुहोस्
गायक सिलाई मेसिन...
यो सबै भन्दा राम्रो विकल्प मध्ये एक हो। रायहरू सहमत छन् कि यो सिलाई मेसिन सुरु गर्नको लागि हो, तर छोटो अवधिमा केहि थप चाहिने मानिसहरूका लागि पनि। त्यसोभए, यदि तपाइँ अलि बढी लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाइँको मोडेल हो। यसमा लम्बाइ र चौडाइ रेगुलेटरसहित २१ वटा टाँका छन्। अरु के छ त, प्रति मिनेट 750 टाँका दिनेछ, मुक्त हात र एकीकृत प्रकाश।
यस अवस्थामा, हामीले पैसाको लागि ठूलो मूल्यमा शर्त लगायौं र त्यो हो कि यद्यपि यो अघिल्लो दुई मोडेलहरू जत्तिकै सस्तो छैन, सिंगर सिम्पल एक उत्कृष्ट प्रविष्टि मोडेल हो जुन तपाइँको 158 यूरोमा हुन सक्छ र तपाइँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ किन्नुहोस्।
अल्फा अर्को ४०+ वसन्त...
उन्नत गुणहरू भएको अर्को सिलाई मेसिन यो हो। को नयाँ संस्करण अल्फा सिलाई मेशिनहरू अर्को। यस दायरामा धेरै मोडेलहरू छन् जुन समान विशेषताहरू छन्। तर यस अवस्थामा, हामीसँग अल्फा नेक्स्ट 45 बाँकी छ। भर्खरै सुरु गर्दैछन् वा आफ्नो पहिलो सिलाई मेसिन लामो समयसम्म चलोस् भन्ने चाहनेहरूका लागि आदर्श। 25 स्टिच र4सजावटी स्केलप संगतिनीहरूले तपाईंको अपेक्षाहरू पूरा गर्नेछन्।
अल्फा नेक्स्ट ४५ एउटा मोडल हो जसको मूल्य लगभग १,225०० यूरो र तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ किन्नुहोस्। तिनीहरूको उपलब्धता सीमित छ त्यसैले यदि तिनीहरूसँग स्टक छैन भने तपाईंले यसलाई खरिद गर्दा, तपाईंले तिनीहरूको कुनै पनि मोडेलहरू नेक्स्ट परिवारबाट किन्न सक्नुहुन्छ किनभने तिनीहरू सुविधाहरूको सन्दर्भमा धेरै समान छन्।
टोयोटा SPB15 - मेसिन...
अर्को सस्तो विकल्प यो हो। द टोयोटा सिलाई मेसिन एसपीबी १५ यो उत्कृष्ट विकल्प मध्ये एक हो। यो कम्प्याक्ट, सरल छ र 15 प्रकारका टाँकाहरू छन्। ती मध्ये, हामी4सजावटी प्रकार, हेम स्टिच साथै zig-zag हाइलाइट गर्छौं। यसमा धेरै उपयोगी रिकोइल लिभर पनि छ।
Toyota SPB15 सिलाई मेसिनको मूल्य मात्र 112 यूरो हो र तपाईं सक्नुहुन्छ यहाँ किन्नुहोस्.
व्यावसायिक सिलाई मेसिनहरू
के तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ एक हो भने व्यावसायिक सिलाई मेसिन, तल हामी तपाईंलाई फाइदाहरू र राम्रो गुणस्तरको काम खोज्नेहरूका लागि केही पूर्ण मोडेलहरू प्रस्ताव गर्दछौं:
बर्नेट सिउ एन्ड गो ८
- स्टिचका प्रकारहरू: 197
-7 आँखा 1 कदम
-अन्य सुविधाहरू: क्विल्टिंग, प्याचवर्क, 15 सुई स्थिति 349,99 €
गायक कर्वी 8770
- स्टिचका प्रकारहरू: 225
-6 आँखा 1 गणना
-अन्य सुविधाहरू: वर्णमाला ढाँचा, स्मार्ट थ्रेडिङ मूल्य उपलब्ध छैन
प्रस्ताव हेर्नुहोस्नोट: 8. / /
गायक स्टारलेट 6699
- स्टिचका प्रकारहरू: 100
-6 आँखा 1 कदम
-अन्य सुविधाहरू: 12 सुई स्थिति, धातु संरचना 279,99 €
सिंगर क्वान्टम स्टाइलिस्ट 9960 XNUMX०
- स्टिचका प्रकारहरू: 600
-13 आँखा 1 कदम
-अन्य सुविधाहरू:2एलईडी बत्ती, 26 सुई स्थिति 749,00 €
- स्टिचका प्रकारहरू: 60
-7 आँखा -
अन्य सुविधाहरू: LCD डिस्प्ले, डबल उचाइ प्रेसर खुट्टा 649,00 €
जब हामी व्यावसायिक सिलाई मेसिनको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी स्पष्ट छौं कि हामी पहिले नै ठूला सर्तहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। को लागि थप सुविधाहरू व्यावसायिक रूपमा कामहरू समाप्त गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, Bernett Sew&Go 8 ले हामीलाई कुल 197 वटा टाँकाहरू छोड्छ। जसमध्ये ५८ सजावटी छन् । तपाईंले कुल 58 सुई स्थिति र प्रेसर खुट्टाको डबल उचाइ पनि पाउनुहुनेछ। यो धेरै प्रतिरोधी छ र एक मुक्त हात छ।
यो पेशेवर सिलाई मेसिन को मूल्य छ 399 यूरो र तपाईं सक्नुहुन्छ यहाँ किन्नुहोस्।
गायक कर्वी 8770 -...
निस्सन्देह, हामी अर्को उत्कृष्ट विकल्पहरूको सामना गरिरहेका छौं। एक ब्रान्ड भन्दा पहिले जुन हामी सबैलाई थाहा छ र जसले हामीलाई सधैं उत्तम विकल्पहरू देखाउँछ। यस मामला मा, कुल 225 टाँकाहरूसँग जोडिएको छ। अवश्य पनि त्यसका लागि धन्यवाद तपाईं आफ्नो कल्पना उड्न दिन सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, यसमा ढाँचाहरू छन्, समायोज्य सिलाई लम्बाइ र चौडाइ र स्वचालित घुमाउरो प्रणालीको साथ। डबल सुई र सात प्रकारका बटनहोलहरू ... हामी थप के माग्न सक्छौं?
यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सिंगर कर्वी किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ
हामीले जम्मा १०० वटा टाँका लगाएर सुरु गरिसकेका छौं। त्यसोभए, हामीले पहिले नै एक विचार प्राप्त गर्न सक्छौं कि यो अर्को मेसिन हो जसले हामीलाई चाहेको बेला अगाडि बढ्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूको लम्बाइ र चौडाइ समायोज्य छ। साथै, यो छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ 12 सुई स्थिति साथै नि: शुल्क हात र एलईडी प्रकाश। बाक्लो कपडाले पनि यसको प्रतिरोध गर्दैन।
यद्यपि यो एक पेशेवर सिलाई मेसिन हो, Singer Starlet 6699 तपाईंको लागि मात्र हुन सक्छ 295 यूरो। के तपाई यो चाहानुहुन्छ? यसलाई यहाँ किन्नुहोस्
गायक क्वान्टम स्टाइलिस्ट...
निस्सन्देह, यदि हामीले व्यावसायिक सिलाई मेसिनहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, हामी सिंगर क्वान्टम स्टाइलिस्ट 9960 लाई बिर्सन सक्दैनौं। निस्सन्देह, यो ती मध्ये एक हो जुन तपाईंले दिमागमा राखेका सबै कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनुहुनेछ। यसमा 600 प्रकारका स्टिचहरू छन्, यसको लम्बाइ र चौडाइ दुवै समायोजन गर्न सकिन्छ। छ भनेर हामी भन्न सक्छौं बजारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मध्ये एक.
यसको मूल्य हो 699 यूरो तर बदलामा हामीले बजारमा सबैभन्दा राम्रो सिलाई मेसिनहरू प्राप्त गर्नेछौं र त्यो किन्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट।
अल्फा मोडल २१६०-मेसिन...
हामीसँग अल्फा मेसिन मोडेल छ जसमा उत्तम विशेषताहरू छन्, LCD स्क्रिन प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। पनि हुनेछ बाक्लो कपडाहरूको लागि उत्तम, त्यसैले तपाईं एक आदर्श परिणाम संग विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। स्वचालित थ्रेडर, साथै ६० वटा टाँका र सात प्रकारका बटनहोलहरू।
यस पेशेवर सिलाई मेसिनको मूल्य 518 यूरो हो र तपाईं सक्नुहुन्छ यहाँ किन्नुहोस्।
मेरो पहिलो सिलाई मेसिन कसरी छनौट गर्ने
मेरो पहिलो सिलाई मेसिन छनौट गर्न सजिलो काम नहुन सक्छ। हामी सबै राम्रो, प्रतिरोधी मेसिनको बारेमा सोच्दछौं जसले राम्रो फिनिशको साथ काम गर्दछ। तर यस बाहेक, खातामा लिनको लागि अन्य विवरणहरू छन्।
हामीले यसको के उपयोग गर्ने?
यद्यपि यो सबैभन्दा दोहोरिने प्रश्नहरू मध्ये एक हुन सक्छ, यो आवश्यक छ। यदि तपाइँ यसलाई सबैभन्दा आधारभूत कार्यहरूको लागि मात्र प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो अधिक व्यावसायिक मेसिनमा धेरै खर्च गर्न लायक छैन। केहि भन्दा बढि किनभने तपाईले यसको आधा प्रकार्यहरू प्रयोग गर्नुहुने छैन। अब, यदि तपाईलाई सिलाईको संसार मनपर्छ, धेरै आधारभूत मेसिन किन्नुहोस्। सबै भन्दा राम्रो कुरा यो मध्यम छ, कि यो धेरै प्रकार्यहरू छन् र यसले हामीलाई अलि अगाडि बढ्न अनुमति दिन्छ। अन्यथा, छोटो समयमा यो हाम्रो आवश्यकताको लागि केहि हदसम्म पुरानो हुनेछ।
र चिन्ता नगर्नुहोस् यदि तपाईंलाई पहिले यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने थाहा छैन, यहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ सिलाई सिक्नुहोस् धेरै सरल र स्पष्ट रूपमा।
मेरो पहिलो सिलाई मेसिनमा के सुविधाहरू हुनुपर्छ?
सिलाई प्रकारहरू: खातामा लिनु पर्ने कारकहरू मध्ये एक सिलाई हो। धेरै आधारभूत कामहरूको लागि, थोरै भएको मेसिन उत्तम हुनेछ। यदि होइन भने, सबैभन्दा धेरै स्टिच भएकाहरू छान्नुहोस्। बाक्लो कपडाहरूसँग काम गर्दा सिलाई लम्बाइ महत्त्वपूर्ण छ। यसरी, हामीलाई लामो सिलाई चाहिन्छ। यदि तपाइँ काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने स्टिचको चौडाइ पनि महत्त्वपूर्ण छ लोचदार ब्यान्ड वा ओभरकास्टिङ राख्नुहोस्.
आँखा: तिनीहरू बीच धेरै भिन्नताहरू छन्। निस्सन्देह, चार चरणहरूमा बटनहोल बनाउनु एक बनाउनु जस्तै होइन। यस विवरणको साथमा हामीले कपडाहरूमा विभिन्न बटनहोलहरू बनाउन सक्ने भएकाले ध्यानमा राख्नु पर्ने कुरा।
सुई स्थितिहरू: सिलाई मेसिनको जति धेरै स्थानहरू छन्, विभिन्न प्रकारका सिलाई छनौट गर्दा हामीसँग धेरै विकल्पहरू हुनेछन्।
मेसिन ब्रान्ड: सामान्यतया, राम्रो ज्ञात ब्रान्डहरूमा आफ्नो भरोसा राख्नु सधैं राम्रो हुन्छ। कुनै पनि कुरा भन्दा बढी किनभने हामीलाई थाहा छ कि हामी राम्रो गुणहरूको लागि तिरिरहेका छौं। थप रूपमा, हामीसँग प्राविधिक सेवाहरू हातमा र साथै हामीलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न भागहरू हुनेछन्।
पोटेरिया: कृपया ध्यान दिनुहोस् कि 75W भन्दा कम पावर भएका मेसिनहरू बाक्लो कपडा सिलाईका लागि उपयुक्त छैनन्।
याद गर्नुहोस् कि सिलाई मेसिनका धेरै फाइदाहरू छन्। मुख्य मध्ये एक हो लुगा मा केहि यूरो बचत गर्न सक्षम हुनु। बच्चाहरूले नयाँ लुगाहरू हराउँदा वा तपाईं पसलमा जाँदा र तपाईंले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने कुनै पनि कुरा फेला पार्न सक्नुहुन्न भने पक्कै पनि तपाईं निराश हुनुहुनेछ। अब तपाइँ यो सबै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, थोरै धैर्य र समर्पण संग। निश्चित रूपमा:
यी अवस्थामा, आफैलाई द्वारा चकित हुन नदिनुहोस् पुरानो सिलाई मेशिनहरू किनकि तिनीहरू ह्यान्डल गर्न धेरै जटिल छन् र आज तिनीहरू अरू केहि भन्दा सजावटी तत्वको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यदि बजेट तपाईंको लागि समस्या हो भने, तपाईं जहिले पनि खरिद गर्न रिसोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो हात सिलाई मेसिन.
घरेलु सिलाई मेसिन बनाम औद्योगिक सिलाई मेसिन
के तपाईंलाई मुख्य थाहा छ? घरेलु सिलाई मेसिन र उद्योग सिलाई मेसिन बीच भिन्नताउसलाई? निस्सन्देह, यो अर्को विवरण हो जुन तपाईले दुई मध्ये एउटा खरीद गर्न सुरु गर्नु अघि जान्नुपर्छ। यहाँ फेरि त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन तपाईंले जान्नुपर्छ।
घरेलु सिलाई मेसिन
जसरी यसको नामले स indicates्केत गर्दछ, घरेलु सिलाई मेसिन एक हो जसमा सबैभन्दा सामान्य कामहरूको लागि आधारभूत कार्यहरू छन्। तिनीहरूमध्ये हामी सिलाई कार्यहरू हाइलाइट गर्छौं जुन हामी सबैलाई थाहा छ। केही लुगाहरू मिलाउनुहोस्, आँसु, सिम वा जिपरहरू सिलाउनुहोस्।
औद्योगिक सिलाई मेसिन
तिनीहरू सबैभन्दा भारी कामको लागि अभिप्रेरित छन्। तिनीहरूले केही ग्यारेन्टी अधिक व्यावसायिक काम र धेरै प्रतिरोधी seams संग। यस प्रकारको मेसिनको लागि असबाब वा पट्टाहरू उपयुक्त छन्। उनका साथीहरूमा सोच्न नसकिने कुरा। यी सबैको अतिरिक्त, यो भन्नुपर्दछ कि जब हामी यस प्रकारको मेसिन चाहन्छौं, यो किनभने हामीसँग हरेक दिन ठूलो काम छ र किनभने हामी सिलाईको संसारमा पहिले नै अनुभव भन्दा बढि छौं। तिनीहरू ठूलो मात्रामा कपडाहरूसँग काम गर्ने र कारखानामा मात्र होइन, तर घरमा पनि काम गर्ने उद्देश्यका छन्।
तिनीहरूले हामीलाई प्रति मिनेट 1000 र 1500 स्टिचहरू बीचको गति प्रस्ताव गर्छन्, पक्कै पनि यसको केही नकारात्मक पक्ष पनि छ। यसले पारम्परिक मेसिनको तुलनामा बढी ऊर्जा खपत गर्नेछ र तिनीहरूले अरूभन्दा बढी आवाज निकाल्न सक्छन्।
सिलाई मेसिन कहाँ किन्न
आज हामीसँग धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ हामी सिलाई मेसिन किन्न सक्छौं। एकातिर, हामीसँग छ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, हाइपरमार्केटहरू साथै स्टोरहरू जहाँ तपाईं घरको लागि अन्य उत्पादनहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, यसको अतिरिक्त, तपाईंसँग आधिकारिक बिन्दुहरू पनि छन् जुन प्रत्येक मेसिनको ब्रान्डहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ।
तर यदि तपाईं एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घण्टा खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, अनलाइन बिक्री अर्को सबैभन्दा विशेष विकल्प हो। Amazon जस्तै पृष्ठहरू तिनीहरूसँग सबै प्रकारका मोडेलहरू छन्।, साथै यसको राम्रो-विस्तृत सुविधाहरू र धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूको साथ। वास्तवमा, तपाईं भौतिक स्टोरहरूको तुलनामा केही यूरो बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
सिलाई मेसिन सामान
सबै सिलाई मेसिनहरू धेरै सामानहरूसँग आउँछन्। निस्सन्देह, यो मोडेल को प्रकार मा निर्भर हुन सक्छ। यद्यपि, स्पेयर पार्ट्सहरू सधैं हाम्रो खरिदको आधारहरू मध्ये एक हुनेछ। जब यो तिनीहरूलाई खरीद गर्न आउँछ, जबसम्म तपाईं हेर्नुहुन्छ तपाईको मेसिनको विनिर्देशहरू। त्यहाँ तिनीहरूले तपाईंलाई कुन विशिष्ट प्रकारको आवश्यकता छ वा, यदि यसले विश्वव्यापीहरूलाई समर्थन गर्छ भने बताउनेछ।
अर्को हामी देख्नेछौं सिलाई मेसिन सामान सबैभन्दा सामान्य:
यद्यपि हामी सोच्छौं कि यसले हामीसँग भएका थ्रेडहरूसँग सेवा गर्नेछ, यो कहिल्यै पर्याप्त छैन। कहिलेकाँही, हामीलाई मनमा आउने थप मौलिक विकल्पहरूको लागि थप रंगहरू चाहिन्छ। याद गर्नुहोस् कि यो हुनु आवश्यक छ पलिएस्टर थ्रेड साथै कढ़ाई। तपाईंले मेसिन किन्नु भएको स्टोरमा, तिनीहरूले पनि तिनीहरूलाई तपाईंको निपटानमा राख्नेछ।
यद्यपि धेरै मेसिनहरूसँग पहिले नै छ, यो तिनीहरूलाई ध्यानमा राख्न लायक छ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, तपाईं seams विभिन्न प्रकार बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं तिनीहरू बिना हुन सक्नुहुन्न!
यदि प्रेसर खुट्टा वा थ्रेडहरू आधारभूत छन् भने, सुईहरूको बारेमा के हुन्छ? कोही हाम्रो मेसिन लिएर आउँछन्, तर याद गर्नुहोस् कि केहि बाटोमा हराउन सक्छ। त्यसैले सधैं हातमा छ धेरै सुई। यो छनौट गर्न सबै भन्दा राम्रो छ विभिन्न कपडाका लागि सुई र राम्रो गुण।
Bobbins संग, यो एक केस खोज्न सबै भन्दा राम्रो छ। यसरी तपाईंले कुनै पनि मिस गर्नुहुने छैन। लगभग 12 वा 15 हुनु राम्रो हो। यो मनमा राख्नुहोस्!
यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि तपाइँ यी सामानहरू व्यक्तिगत रूपमा लिन चाहनुहुन्न भने, तपाइँ सधैं तथाकथित प्याक किन्न सक्नुहुन्छ। यसमा, तपाईंले बाहेक सबैभन्दा आवश्यक पाउनुहुनेछ केही कैंची हाम्रो कामहरू फिट गर्न विभिन्न मोडेलहरूमा। तपाईं मापन गर्न कटर र टेपहरू पनि छुटाउन सक्नुहुन्न।
«» मा ४ टिप्पणीहरू
जुलाई १, २०१ साँझ :31::2018 बजे
म भाइ cs10, भाई fs40, गायक 6699, alfa comoakt 500 को बीचमा हिचकिचाउँदै छु
कुन सबैभन्दा पूर्ण हुनेछ?
अगस्त,, २०१ 1 बिहान १२:2018०
पैसाको लागि मूल्यको लागि, सिंगर स्कार्लेट 6699 विजेता हो। यदि तपाइँ सबैभन्दा पूर्ण चाहानुहुन्छ भने, Compact 500E Plus तर यसको मूल्य धेरै उच्च छ।
जनवरी २, २०११ साँझ :2::2019
नमस्ते नयाँ वर्षको शुभकामना !!
कृपया मलाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु, मेरो ८ वर्षकी छोरी छिन् जो सानैदेखि फेसन र कपडा डिजाइन गर्न मन पराउँछिन्, यो उनको जन्मजातबाट आएको कुरा हो, यो उनको जोश हो, केहि दिन अघि मैले देखेको थिएँ lidl सिलाई मेसिन लगभग 8 यूरो बढी वा पुरुषहरू मलाई राम्रोसँग याद छैन, मुद्दा यो हो कि यो अन्तिम थियो र म सानो विवरणहरूको कारण यो किन्न विश्वस्त भइन।
यो होइन कि म धेरै पैसा खर्च गर्न चाहन्छु, तर ठीक छ, म केहि किन्न चाहन्न जुन पछि मलाई सामानहरू, आदि फेला पार्न गाह्रो हुन्छ, किनकि हामी क्यानरी टापुहरूमा बस्छौं र सबै कुरा बिस्तारै जान्छ। मैले मेरो जीवनभर गायकलाई चिनेको छु, मेरो घरमा सधैं थियो, र मलाई गुणस्तर र मूल्यको हिसाबले राम्रो होस् भन्ने चाहना छ र म हराएको छु चाहे त्यो गायक होस् वा अर्को तपाईंले सिफारिस गर्नुभयो। हामी यसलाई सिक्नको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौं र हामी प्रगति गर्दा केही समय टिक्न चाहन्छौं, के तपाईंले मलाई मद्दत गर्नुहोस् र कृपया केही सिफारिस गर्नुहोस्।
तपाईंले मलाई भन्नुभएका कुराहरूबाट, मैले सबैभन्दा धेरै सिफारिस गर्ने मोडेल भनेको Singer Promise हो, एक सरल तर भरपर्दो सिलाई मेसिन जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ र यसले तपाईंको छोरीलाई सिलाईको संसारमा आफ्नो सीप विकास गर्न अनुमति दिनेछ।
तपाईंले अनुभव प्राप्त गर्दा, तपाईं थप पूर्ण मोडेलहरूमा छलांग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर सुरु गर्नका लागि, यो कुनै शंका बिना नै सबैभन्दा सिफारिस गरिएको विकल्प हो, र यो अहिले बिक्रीमा पनि छ।
उपचारहरू अपलोड गरिनेछ
फेब्रुअरी १०, २०११ बेलुकी :22::2019
नमस्ते, मसँग सधैं सिलाई मेसिन थियो। तर अब म अन्य चीजहरू सिलाउन चाहन्छु र मसँग भएकोले मलाई जवाफ दिँदैन। मैले इन्टरनेटमा धेरै देखेको छु तर म निर्णय गर्न सक्दिन। मलाई तपाईंको मद्दत चाहिन्छ। म शंकामा छु भाइ cx 7o, वा गायक STARLEYT 6699 को बारेमा। धेरै धेरै धन्यवाद
दुई मध्ये कुन सिलाई राम्रो छ?
मार्च १२, २०१ बिहान २::1 बिहान
तपाईंले प्रस्ताव गर्नुभएको मोडेलहरू मध्ये, दुबै उत्कृष्ट विकल्पहरू छन्, लगभग व्यावसायिक। सिंगर मेसिन थप पूर्ण छ किनभने यसमा धेरै टाँकाहरू छन् (100 बनाम 70)।
भाइ CX70PE को लागि, यो एक धेरै प्याचवर्क-उन्मुख मोडेल हो र यो सिंगर भन्दा लगभग 50 यूरो सस्तो छ, त्यसैले यदि तपाइँ यस मोडेलको साथ आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ भने, यो अर्को उत्कृष्ट विकल्प हो।
म एक पोर्टेबल सिलाई मेसिन खोज्दै छु जुन छिटो छ किनकि म मेरी आमाको पुरानो पेशेवर अल्फा र रेफ्रेसँग सिलाई गर्ने बानी परेको छु र मैले सहकर्मीहरूबाट देखेको धेरै ढिलो छ।
मलाई यो सामान्य सिलाईको लागि चाहिन्छ तर लेथरेट जस्ता बाक्लो सामग्रीहरू सिलाई गर्न सक्षम बलियो पनि। मेरो बजेट लगभग €200-400 छ। त्यहाँ धेरै ब्रान्डहरू र धेरै विचारहरू छन् जुन मलाई थाहा छैन कहाँबाट सुरु गर्ने। कुन मध्ये तपाईं मलाई गति, बलियोता र बहुमुखी प्रतिभा खोज्दै छु भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सल्लाह दिनुहुन्छ।
तपाईले हामीलाई बताउनुभएको कुराबाट, तपाईले खोजिरहनु भएको मोडेल सिङ्गर हेभी ड्यूटी 4432 हो। यो एक बलियो मेसिन हो (यसको शरीर स्टिल प्लेटको साथ धातुको छ), छिटो (प्रति मिनेट ११०० स्टिच) र बहुमुखी (तपाईले सबै प्रकारका कपडाहरू सिलाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा 1100 प्रकारका स्टिचहरू छन्)।
सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो तपाईंको बजेटमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ।
शुभ प्रभात, म नयाँ सिलाई मेसिन किन्न इच्छुक छु, किनकि मसँग भएको छ, मसँग तान्ने शक्ति र प्रेसर खुट्टाको दोब्बर उचाइ छैन। सबै भन्दा माथि, म सूती कपडा संग नायलॉन टेप सिलाई, त्यहाँ केहि क्षेत्र छ कि मैले बाक्लो नायलन र कपास को2टुक्रा सिलाई छ। मेसिनको साथ जुन मसँग अब एक गायक छ, जसले मेरो लागि धेरै राम्रो काम गर्दछ, तर मसँग तान्ने शक्ति छैन। तपाई कुन मेसिन सिफारिस गर्नुहुन्छ?
तपाईको हालको मेसिन कति शक्तिशाली छ? सिंगर हेभी ड्युटीमा हेर्नुहोस् यदि यो तपाइँका आवश्यकताहरू अनुरूप छ।
अप्रिल २०, २०२० 25::2019 अपराह्न
नमस्ते, मसँग गायक सेरेनेड छ जुन मैले सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको थिएँ र अहिले म यस संसारमा पहिले नै संलग्न भएको छु, मलाई अझ धेरै चाहिएको थियो, विशेष गरी अझ बलियो कपडाको लागि र थप चीजहरू गर्न, तपाई मलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ, म अल्फास हेर्दै थिएँ। कि मलाई सत्य डिजाइन गरेर मन पर्यो, तर म तपाईको सल्लाह जान्न चाहन्छु।
तपाइँको बजेट के हो थाहा नभएको, तपाइँलाई सिफारिस गर्न गाह्रो छ किनकि विकल्पहरूको दायरा धेरै फराकिलो छ र व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि €150 मोडेल पहिले नै तपाइँको हालको मेसिन भन्दा उच्च छ। तर मलाई थाहा छ यदि तपाइँ तपाइँको आवश्यकताहरु मा आधारित सबै भन्दा राम्रो सिलाई मिसिन मोडेल को चयन दिन को लागी €150, €200 वा €400 खर्च गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईंले हामीलाई दिनुभएको जानकारीको साथ, मैले सोच्न सक्ने एक मात्र कुरा भनेको ती थप बलियो कपडाहरू सिलाई गर्न सिंगर हेभी ड्युटीलाई सिफारिस गर्नु हो।
Patricio Bustillos भास्को
मे २०, २०१ 2:०:2019 अपराह्न
म मेरी प्रेमिकालाई उनको जन्मदिनको लागि सिलाई मेसिन दिन चाहन्छु। उनले वर्षौंदेखि सिलाई, फेसन डिजाइन र अन्य पाठ्यक्रमहरू पछ्याइरहेकी छिन्, तर मलाई सिलाई मेसिनको यो संसारको बारेमा कुनै जानकारी छैन। उसलाई आफ्नै लुगा बनाउन र आफ्ना विचारहरू र स्केचहरूलाई मूर्त रूपमा अनुवाद गर्न आवश्यक छ। म पनि यो केहि पारिस्थितिकी हुन चाहन्छु, जसले बिजुलीको खपतमा धेरै प्रतिनिधित्व गर्दैन। तपाई कुन मेसिन सिफारिस गर्नुहुन्छ?
तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद!
मे २,, २०१3बिहान २::2019 बिहान
तपाईको बजेट थाहा नपाई, हामीलाई सिलाई मेसिन सिफारिस गर्न धेरै गाह्रो छ।
पर्यावरणवादको स्तरमा, तिनीहरू सबै धेरै अवस्थामा समान मात्रामा प्रकाश खर्च गर्न आउँछन्। जे भए पनि, यो बिजुलीको बिलमा ध्यान दिनको लागि धेरै कम लागतको आंकडा हो (हामी वातानुकूलित वा ओवनको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं, जसले धेरै खपत गर्दछ)।
यदि तपाईंले हामीलाई खर्च गर्न चाहनुभएको मार्जिन दिनुभयो भने, हामी तपाईंलाई अलि राम्रो मद्दत गर्न सक्छौं।
मे २०, २०१ 15:०:2019 अपराह्न
तपाईको जवाफको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले बजेट लेख्न पूर्णतया बिर्सें, यो 150 देखि 300 यूरो बीचमा जान्छ।
मे २,, २०१ 16 बिहान २::2019 बिहान
कुन सिलाई मेसिन किन्ने भन्ने तपाईको प्रश्नको सम्बन्धमा म तपाईलाई लेख्दैछु।
तपाईं पहिले नै फेसन र सिलाईको ज्ञान भएको व्यक्तिको लागि उपहारको रूपमा चाहनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका स्टिचहरू प्रदान गर्ने मोडेलमा शर्त लगाउनु उत्तम हुन्छ। त्यसको लागि, अल्फा प्राटिक9एक उत्तम उम्मेद्वार हो जुन तपाईंसँग पनि प्रस्तावमा छ। र यदि तपाईं सिलाई किताब, सामान वा कभर पनि दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईंसँग प्रशस्त बजेट छ।
यदि तपाईंले आफ्नो बजेट अलि बढाउनुभयो भने, तपाईंसँग Compakt 500E इलेक्ट्रोनिक सिलाई मेसिन छ जसले अझ बढी स्टिच डिजाइनहरू प्रदान गर्दछ र अर्को लिगमा छ जब यो काम गर्ने कुरा आउँछ।
जून १,, २०१ 18 बिहान १::2019२
नमस्ते, म लोगो वा अक्षरहरू एम्ब्रोइड गर्ने सिलाई मेसिन किन्न इच्छुक छु। तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि कुन मोडेलले यो गर्छ? शुभकामना
तपाईंले हाम्रो सिलाई मेसिन वेबसाइटमा हामीलाई छोड्नुभएको सन्देशको लागि म तपाईंलाई लेख्दैछु।
तपाईंले भनेको कुराबाट, सबैभन्दा सिफारिस गरिएको कुरा यो हो कि तपाईंले प्याचवर्कको लागि सिलाई मेसिन लिनुहोस्, तिनीहरू ती हुन् जसले सबैभन्दा धेरै विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दछ जब यो अक्षरहरू र विभिन्न छविहरू कढाईको कुरा आउँछ।
उदाहरण को लागी, अल्फा जार्ट 01 एक उत्कृष्ट उम्मेद्वार र धेरै अफ-रोड हो। तपाईं यसको साथ सबै गर्न सक्नुहुन्छ।
सेप्टेम्बर १,, २०११ बिहान २:०27 बजे
शुभ प्रभात, म तपाईंलाई व्यावहारिक अल्फा9एल्ना 240 र जनोम 3622 हेर्ने तीनवटा मेसिनहरूमा तपाईंको राय दिन चाहन्छु वा तपाईंले मेरो लागि राम्रो काम गर्नेछ जस्तो लाग्छ, धन्यवाद, म तपाईंको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छु।
नोभेम्बर,, २०१० साँझ :10::2019
मलाई तपाईको ब्लग मन पर्छ, यसले मलाई धेरै मद्दत गर्दछ। म कटिङ, टेलरिङ र ढाँचा बनाउने अध्ययन गर्न थालेको छु किनभने म यसमा आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। म एउटा राम्रो मेसिनमा लगानी गर्न चाहन्छु जुन मलाई टिक्छ र सबै भन्दा माथि लुगाका लागि उपयोगी छ। म यसमा स्किम गर्न चाहन्न, त्यो हो, सबैभन्दा आधारभूत होइन (मलाई आवश्यक पर्दैन भन्ने सबैभन्दा महँगो छैन) तपाइँ कुन सिफारिस गर्नुहुन्छ?
धेरै धेरै धन्यवाद !!!!
नोभेम्बर १२, २०२० बिहान १::11
व्यक्तिगत रूपमा, हामी Alfa Pratik9सिफारिस गर्छौं। यो एक सबै भू-भाग सिलाई मेसिन हो जसले दुबै अनुभवहीन प्रयोगकर्ताहरू र यसका सबै सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक ज्ञान भएकाहरूका लागि राम्रो काम गर्दछ।
सेप्टेम्बर २,, २०२० 2:०2020 अपराह्न
नमस्ते, मसँग एक गायक 4830c छ, तर यसले अब धेरै राम्रोसँग काम गर्दैन, जुन एउटै ब्रान्डको हुनेछ, उस्तै वा थोरै उच्च विशेषताहरू भएको, हाल। धन्यवाद।
डाटा उद्देश्य: स्प्यामको नियन्त्रण, टिप्पणीहरूको व्यवस्थापन।
वैधता: तपाईंको सहमति
डाटाको सञ्चार: कानूनी दायित्व बाहेक तेस्रो पक्षहरूलाई डाटा सञ्चार गरिने छैन।
डाटाको भण्डारण: Occentus Networks (EU) द्वारा होस्ट गरिएको डाटाबेस
अधिकार: तपाईंले कुनै पनि समयमा आफ्नो जानकारी सीमित गर्न, पुन: प्राप्ति गर्न र मेटाउन सक्नुहुन्छ।
Lidl सिलाई मिसिन
अल्फा सिलाई मेसिनहरू
भाइ सिलाई मेसिन
गायक सिलाई मेसिनहरू
टोयोटा सिलाई मेसिन
एन्टिक सिलाई मेशिनहरू
प्राइम डे सिलाई मेसिनहरू
कालो शुक्रबार सिलाई मेसिनहरू
साइबर सोमबार सिलाई मेसिनहरू
सिलाई मेशिनहरू 2022 - गोपनीयता नीति - कुकीहरूको बारेमा जानकारी